Iimpawu ZamaKristu - I-Glossary Illustrated
Thatha i-Illustrated Tour ye-Christian Symbols
Ngaphandle kwembuzo, umnqamlezo wesiLatini - umgca ophantsi, umnqamlezo onjenga-t - ngowona uphawu oluphawulekayo lobuKristu namhlanje. Nangona kunjalo, ngaphezu kweenkulungwane zamanye amanqaku amanqaku, izihlomelo kunye neempawu ezahlukileyo zimelele ukholo lobuKristu. Olu qoqo lweempawu zamaKristu luquka imidwebo kunye neenkcazo zeempawu eziqhelekileyo ezichongiweyo zobuKristu.
i-shutterjack / Getty Izithombe
Umnqamlezo wesiLatini ngowona mqondiso oqhelekileyo oqhelekileyo owamkelwayo namhlanje. Kukho konke, kwakungumfanekiso wesakhiwo apho uYesu Kristu wabethelela khona . Nangona iintlobo ezahlukahlukeneyo zomnqamlezo zazikho, umnqamlezo wesiLatini wenziwe ngeenqanawa ezimbini zeenkuni eziye zadalwa ukuze zenze ezine iibhokhwe ezilungileyo. Umnqamlezo namhlanje umelela ukunqoba kukaKristu kwisono nokufa ngedini lomzimba wakhe emnqamlezweni.
Ukubonakaliswa komnqamlezo wamaRoma Katolika kumaxesha amaninzi kubonisa ukuba umzimba kaKristu usesiphambanweni. Le fomu yaziwa ngokuba yi-crucifix kwaye igxininisa kumbingelelo nokuhlupheka kukaKristu. Amasonto amaProthestani athetha ukubonisa isiphambano esingenanto, egxininisa uKristu ovusiweyo, ovukile. Abalandeli bobuKristu babonelela ngomnqamlezo ngala mazwi kaYesu (nakwiMateyu 10:38; Marko 8:34; Luka 9:23):
Wandula ke uYesu wathi kubafundi bakhe, "Ukuba ubani ofuna ukuba ngumlandeli wam, kufuneka uphenduke kwiindlela zakho zobugovu, uthathe umnqamlezo wakho, undilandele." (Mateyu 16:24, NIV )
Iintlanzi zamaKristu okanye iIchthys
Iimpawu ZamaKristu Iifayile ezibonakalisa i-Glossary Christian Fish okanye iIchthys. Izithombe © Sue Chastain
Inhlanzi yamaKristu, ebizwa ngokuba nguYesu Intlanzi okanye iIchthys, yayiyimpawu eyimfihlo yobuKristu bokuqala.
Ichthys okanye isimboli yentlanzi yayisetyenziswa ngamaKristu okuqala ukuba azibonele njengabalandeli bakaYesu Kristu kunye nokubonakalisa ubuhlobo babo nobuKristu. UIchthys ligama lesiGrike elithi "intlanzi". "Inhlanzi yamaKristu," okanye "intlanzi kaYesu" inamacandelwana amabini ajikelezayo ekulandeleni umxholo weentlanzi (ngokuqhelekileyo kunye neentlanzi "zokubhukuda" ngakwesobunxele). Kuthiwa kuthiwa isetyenziswe ngamaKristu atshutshiswa kwangaphambili njengophawu oluyimfihlo lokuchonga. Igama lesiGrike leentlanzi (Ichthus) lifakela igama elithi " uYesu Kristu , uNyana kaThixo, uMsindisi."
Abalandeli bobuKristu babonakalisa intlanzi njengesimboli kuba iintlanzi zibonakala rhoqo entsimini kaKristu. Babesisiseko sexesha lexesha lokutya kunye neentlanzi zazihlala zikhankanywe kwiVangeli . Ngokomzekelo, uKristu wandisa iintlanzi ezimbini kunye nezonka ezintlanu kuMateyu 14:17. UYesu wathi kuMarko 1:17, "Woza, landela mna ... ndiza kuba ngabadobi babantu." (NIV)
Iimpawu ZamaKristu Zifanekisiwe I-Glossary Dove. Izithombe © Sue Chastain
Ihobe limele uMoya oyiNgcwele okanye uMoya oyiNgcwele kwi-Christianity. UMoya oyiNgcwele wehla phezu kukaYesu njengejuba xa ebhaptizwa eMlambo iYordan :
... kwaye uMoya oyiNgcwele wehla kuye ngesimo somzimba njengejuba. Kwaphuma izwi livela ezulwini lithi: "Wena unguNyana wam, endimthandayo; (Luka 3:22, NIV)
Ihobe libonakalisa uxolo. KwiGenesis 8 emva komkhukula , ihobe labuyela kuNowa ngegatsha lomnquma kwintsimbi yalo, ebonisa ukuphela kwesigwebo sikaThixo kunye nokuqala komnqophiso omtsha nomntu.
Dorling Kindersley / Getty Izithombe
Enye yeempawu ezicacileyo zobuKristu isithsaba sevava, uYesu ayembethe phambi kokubethelwa kwakhe :
... kwaye waphonsa ndawonye isithsaba sevava waza wayibeka entloko. Bambeka isandla sakhe sokunene, bawa ngobuso phambi kwakhe, bamhlekisa. "Woo, kumkani wamaYuda!" bathe. (Mateyu 27:29, NIV)
Kwimiva yeBhayibhile isoloko ibhekisela kwisono, kwaye ngoko ke, isithsaba sevava sifanele - ukuba uYesu uza kuthwala izono zehlabathi. Kodwa isithsaba nayo ifanelekile kuba ibonisa uKumkani wobuKristu obandezelekayo - uYesu Kristu, uKumkani weeKumkani kunye neNkosi yeNkosi.
UZiqu-zintathu (i-Borromean Ring)
Iimpawu ZamaKristu ZezobuGcisa ZoBathathu Emithathu (Borromean Rings). Izithombe © Sue Chastain
Zininzi iimpawu zoBathathu Emnye ebuKristwini. Izindonga zeBorromean zijikelezo ezintathu ezithintekayo ezibonisa ubuthathu bukaThixo.
Igama elithi "u- trinity " livela kwisibizo lesiLatini esithi "trinitas" esithetha "ezintathu zinye." Uqu-zintathu ubonisa inkolelo yokuba uThixo ungomnye Uququzelelwe ngabantu abathathu abahlukeneyo abakho ngokulinganayo, ukudibanisana ngonaphakade, njengoYise, uNyana, noMoya oyiNgcwele . Iindinyana ezilandelayo zibonisa imbono yoBathathu Emnye: Mateyu 3: 16-17; Mateyu 28:19; Yohane 14: 16-17; 2 Korinte 13:14; IZenzo 2: 32-33; Yohane 10:30; Yohane 17: 11 & 21.
Iimpawu ZamaKristu ZezobuGcisa Umbhalo Wesithathu (Triquetra). Izithombe © Sue Chastain
I-Triquetra iyisimboli seentlanzi esinxinxathu-ntlanzi esilungelelanayo esichaza ubungqina bobuKristu.
Iimpawu ZamaKristu Ukubonisa Ukukhanya Kwelizwe. Izithombe © Sue Chastain
Ngenkcazelo ezininzi ukuba uThixo "ukhanyise" kwiZibhalo, ukubonakaliswa kokukhanya okufana namakhandlela, amatangatye, kunye nezibane ziye zaba ziimpawu eziqhelekileyo zobuKristu:
Nguwo lo myalezo esiwuzwileyo kuye, sitsho kuwe: UThixo ulula; kuye akukho ubumnyama kubo bonke. (1 Yohane 1: 5, NIV)
Xa uYesu wathetha kwakhona kubantu, wathi, "Ndingumkhanyiselo wehlabathi." Othe wandilandelayo akayi kuhamba ebumnyameni, kodwa uya kuba nokukhanya kobomi. " (Yohane 8:12, NIV)
UYehova ungukukhanya kwam, nosindiso lwam, ngubani na ukuba ndiyike? (INdumiso 27: 1, iNIV)
UkuKhanya kubonisa ubukho bukaThixo. UThixo wabonakala kuMoses kwisiqithi esivuthayo kunye namaSirayeli kwintsika yomlilo. Umlilo ongunaphakade wobukho bukaThixo wawuza kubethelwa endlwini eYerusalem ngamaxesha onke. Enyanisweni, kuMthendeleko wamaYuda wokuzinikezela okanye "uMthendeleko weeLanga," sikhumbula ukunqoba kwamaMaccabees kunye nokuvuselelwa kweTempile emva kokuhlambuluka phantsi kweGrano-Syria. Nangona bafumana ioli eyingcwele ngelinye ilanga, uThixo ngokumangalisayo wenza ukuba ilangabi elingapheliyo lokutshiswa kwakhe litshise iintsuku ezisibhozo, kwaze kwagqitywa ioli ecocekileyo.
Ukukhanya kumelela ulwalathiso nolwalathiso lukaThixo. INdumiso 119: 105 ithi iLizwi likaThixo libane isibane ezinyaweni zethu kunye nokukhanya kwindlela yethu. 2 uSamuweli 22 uthi iNkosi iyisibane, ijika ubumnyama ibe yikukhanya.
Iimpawu ZamaKristu Zifanekisiwe I-Glossary Star. Izithombe © Sue Chastain
I Nkwenkwezi kaDavide yinkwenkwezi esithandathu eneenkwenkwezi ezenziwe ngamabhontshi amabini angenelo, enye ibonisa, enye ibonisa. Ubizwa ngokuba nguKumkani uDavide kwaye uvela kwiflegi ye-Israel. Ngexesha eliqhelekileyo libonakaliswa njengeliso lobuYuda kunye namaSirayeli, amaKristu amaninzi abonakalisa inkwenkwezi kaDavide.
Inkwenkwezi elinezihlanu zibonakalisa ubuKristu obuhlobene nokuzalwa koMsindisi , uYesu Kristu . KuMateyu 2 amaMagi (okanye amadoda anesilumko) alandela inkwenkwezi eYerusalem efuna uKumkani ozalwayo. Ukusuka apho inkwenkwezi yababakhokela eBhetelehem, waya kwindawo apho uYesu wazalwa khona . Xa bamfumana umntwana nonina, bakhothamela, bamnqula, bemnikela ngezipho.
Kwincwadi yeSityhilelo , uYesu ubizwa ngokuba yiNkwenkwezi yaseMasa (ISityhilelo 2:28; Isityhilelo 22:16).
Iimpawu ZamaKristu Iifayili yeGrassary Isonka newayini. Izithombe © Sue Chastain
Isonka newayini (okanye iidiliya) zimela iSidlo seNkosi okanye iSidlo .
Isonka sibonakalisa ubomi. Yona kukutya okuxhasa ubomi. Ehlane, uThixo walungiselela i- mana , okanye "isinkwa esivela ezulwini," kubantwana bakwaSirayeli. Kwaye uYesu wathi kuYohane 6:35, "Ndiyisonka sobomi. Lowo uza kum, akayi kulamba." NIV)
Isonka sichaza umzimba kaKristu. KwiSidlo Sokugqibela uYesu waqhekeza isonka, wabanika abafundi bakhe wathi, "Lo ngumzimba wam unikwe ngenxa yenu ..." (Luka 22:19 NIV).
Iwayini imelela umnqophiso kaThixo egazini, ithululelwe ngentlawulo yesono sabantu. UYesu wathi kuLuka 22:20, "Le ndebe ngumnqophiso omtsha egazini lam, elichithwa ngenxa yenu." (NIV)
Amakholwa athabatha intlanganiso yobudlelane rhoqo ukuba akhumbule umnikelo kaKristu kunye nakho konke akwenzele khona ebomini bakhe, ukufa nokuvuka kwakhe. Isidlo seNkosi lixesha lokuzihlola nokuthatha inxaxheba kumzimba kaKristu.
Jutta Kuss / Getty Izithombe
Umlambo ongumKristu uyisimboli sokuthembeka kukaThixo nesithembiso sakhe sokusa kuphinda awonakalise umhlaba ngomkhukula. Esi sithembiso sivela kwibali likaNowa noMkhukula .
Emva komkhukula , uThixo wabeka ubusuku esibhakabhakeni njengesibonakaliso somnqophiso wakhe noNowa ukuba angaphinda awonakalise umhlaba kunye nezidalwa eziphilayo ngokukhukula.
Ngokubhakanyiswa phezulu, u-rainbow ubonisa indawo yonke yokuthembeka kukaThixo ngomsebenzi wakhe wobabalo. Ubabalo lukaThixo ngokukholwa kuYesu Krestu alukho kuphela kwimiphefumlo embalwa ekhethiweyo yokuzonwabisa. Iindaba ezilungileyo zokusindiswa , njengomnkantsha, zizonke-ke, kwaye wonke umntu umenyiwe ukuba akubone:
Ngokuba uThixo walithanda kangaka ihlabathi, ukuba wanikela uNyana wakhe oyedwa, ukuba bonke abakholwayo kuye bangayi kubhubha kodwa babe nobomi obungunaphakade. Kuba uThixo akazange amthume uNyana wakhe ehlabathini ukugweba ihlabathi, kodwa ukusindisa ihlabathi ngaye. (Yohane 3: 16-17, NIV)
Ababhali beBhayibhile basebenzisa iimbombo zemvula ukuchaza uzuko lukaThixo:
Njengokubonakala kwesaphetha esisefu ngosuku lwemvula, kwakunjalo ukubonakala kobuqaqawuli beenxa zonke. Oko kwakunjengokubonakala kozuko lweNkosi. Ndathi ndabona, ndawa ngobuso bam, ndava ilizwi lomntu othethayo. (Hezekile 1:28, ESV)
Kwincwadi yeSityhilelo , umpostile uYohane wabona umlotha ojikeleze itrone kaThixo ezulwini :
Kwaoko ndakuMoya, kwaye phambi kwam kwakukho itrone ezulwini kunye nomntu ohleli kuyo. Kwaye lowo wayehleli khona wayenokubonakala kwejasper kunye ne-carnelian. Ulovu, olufana ne-emerald, lujikeleze itrone. (ISityhilelo 4: 2-3, iNIV)
Xa abakholwayo bebona umlobo, bakhunjuzwa ukuthembeka kukaThixo, ububele bakhe bonke, ubuhle bakhe obuqaqawuli, nobukho bakhe obungcwele kunye nobomi obungapheliyo etroneni yobomi bethu.
Iimpawu ZamaKristu Zifanekisiwe I-Glossary Circle. Izithombe © Sue Chastain
Isangqa esingapheliyo okanye umtshini womtshato uyisimboli esingunaphakade. Kwiibini ezitshatileyo zamaKristu, ukutshintshisana kwamathandana omtshato kukubonakalisa kwangaphandle kwesibophelelo sangaphakathi, njengeentliziyo ezimbini zidibanisa kunye kwaye zithembisa ukuthandana ngokunyaniseka ngonaphakade.
Ngokufanayo, umnqophiso womtshato kunye nobudlelwane bomyeni nomfazi ngumfanekiso wobudlelwane phakathi kukaYesu Kristu nomtshakazi wakhe, ibandla. Amadoda ayabongozwa ukuba abeke ubomi babo ngokuthanda nokukhusela. Kwaye kwimeko ekhuselekileyo neyamkelekileyo yomyeni onothando, umfazi ngokwemvelo uyaphendula ngokuzithoba nokuhlonipha. Kanye njengoko ubudlelwane bomtshato , obonakaliswe kwisangqa esingapheliyo, lusetyenziswe ukuhlala ngonaphakade, ngokunjalo ubuhlobo bomKristu buza kunyamezela ngonaphakade.
IMvana kaThixo (uAgnus Dei)
Iimpawu ZamaKristu Ebonisa Imifanekiso YesiXhosa seMvana kaThixo. Izithombe © Sue Chastain
IWundlu likaThixo limele uYesu Kristu, umnikelo ogqibeleleyo, ongenasono owanikelwa nguThixo ukuba axolele izono zabantu.
Wayexinzezelekile kwaye wayexinekile, kodwa akazange avule umlomo wakhe; Waholwa njengemvana ekuxhelweni ... (Isaya 53: 7, NIV)
Ngomso uYohane wabona uYesu eza kuye wathi, "Khangela, iMvana kaThixo, ethatha isono sehlabathi!" (Yohane 1:29, NIV)
Bememeza ngelizwi elikhulu, bathi: "Usindiso lukaThixo wethu, ohlezi etroneni, nakuyo iMvana." (ISityhilelo 7:10, i-NIV)
Iimpawu ZamaKristu Ebonisa Imifanekiso YesiXhosa SeBhayibhile. Izithombe © Sue Chastain
IBhayibhile Eyingcwele yiLizwi likaThixo. Incwadana yomKristu yokuphila. Isigidimi sikaThixo ebantwini-incwadi yakhe yothando - iqulethwe kumaphepha eBhayibhile.
Isibhalo sonke siphefumlelwe nguThixo kwaye sinceda ekufundiseni, ukukhuza, ukulungisa nokuqeqeshwa ngobulungisa ... (2 Timoti 3:16, NIV)
Ndiyanitshela inyaniso, kude kube yilapho izulu nomhlaba ziphela, kungekhona nangona nkcazelo encinci yomthetho kaThixo iya kubonakala kude kube yinjongo yayo. (Mateyu 5:18, NLT )
Mithetho E lishumi
Iimpawu ZamaKristu Zifanekisiwe I-Glossary Ten Commandments. Izithombe © Sue Chastain
Imithetho Elishumi okanye iibhilethi zomthetho yimithetho uThixo ayinika abantu bakaSirayeli ngoMoses emva kokubakhokela eYiputa. Ngokwenene, sisishwankathelo semithetho emininzi efumaneka kwiTestamente yeTestamente eNdala. Banikezela ngemigaqo yokuziphatha eyimfuneko yokuphila kokomoya nokuziphatha. Ibali leMithetho elishumi ibhalwe kwi-Eksodus 20: 1-17 nakuDuteronomi 5: 6-21.
Umnqamlezo kunye nomqhele
Iimpawu ZamaKristu Zigxininisa iGlosary Cross & Crown. Izithombe © Sue Chastain
Umnqamlezo kunye neNdonga ngumqondiso oqhelekileyo kwiicawa zobuKristu. Imele umvuzo elindele ezulwini (isithsaba) ukuba amakholwa aya kwamkela emva kokubandezeleka kunye nokulingwa kobomi emhlabeni (umnqamlezo).
Uyolo umntu okhuthazelayo phantsi kwelingo, kuba xa emele uvavanyo, uya kufumana isithsaba sobomi uThixo asithembise abo bamthandayo. (Yakobi 1:12, NIV)
Alpha kunye neOmega
Iimpawu ZamaKristu Iifayile ezibonakalisa i-Glossary Alpha & Omega. Izithombe © Sue Chastain
I-Alpha yileta yokuqala ye-alfabhethi yesiGrike kunye no-Omega ngowokugqibela. Ezi zinto zincwadi zombini zenza i-monogram okanye isimboli enye yamagama kaYesu Kristu , okuthetha "ukuqala nokuphela." Eli gama lifumaneka kwiSityhilelo 1: 8: "NdingumAlfa no-Omega," kutsho iNkosi uThixo, "ngubani na, ngubani na, kwaye ngubani ozayo, uSomandla." ( NIV ) Izihlandlo ezimbini kwiSityhilelo sibona eli gama likaYesu:
Yathi kum: "Yenzekile, Ndinguye uAlfa no-Omega, ukuQala kunye nokuPhela." Lowo unxaniweyo ndiya kunika ukusela ngaphandle kweendleko kwintwasahlobo yamanzi ebomi. (ISityhilelo 21: 6) , NIV)
"NdingumAlfa no-Omega, owokuQala nowokugqibela, isiQalo kunye nokuPhela." (ISityhilelo 22:13, NIV)
Le ngxelo kaYesu ibaluleke kakhulu ebuKristwini kuba ngokucacileyo kuthetha ukuba uYesu wayekho ngaphambi kokudala kwaye uya kuhlala ekhona ngonaphakade. Wayekunye noThixo ngaphambi kokuba nayiphi na into idalwe, ngoko ke, ithatha inxaxheba ekudalweni. UYesu, njengoThixo, akazange adalwe. Ungunaphakade. Ngaloo ndlela, i-Alpha kunye no-Omega njengophawu lobuKristu lubonakalisa ubuntu obungunaphakade bukaYesu Kristu noThixo.
I-Chi-Rho (iMogogram kaKristu)
Iimpawu ZamaKristu Iifayili yeGlosari yeChi-Rho (iMogogram kaKristu). Izithombe © Sue Chastain
I-Chi-Rho yona mdala endala eyaziwayo (okanye uphawu lweleta) likaKristu. Abanye bathi lo mqondiso "nguChristogram," kwaye ubuyela kumlawuli waseRoma uConstantine (AD 306-337).
Nangona inyaniso yale mabali iyamangalisa, kuthiwa uConstantine wabona lo mboniso esibhakabhakeni phambi kwemfazwe eqinile, kwaye weva isigidimi esithi, "Ngulo mqondiso, unqobe." Ngaloo ndlela, wamkela isimboli somkhosi wakhe. Chi (x = ch) kunye neRho (p = r) ziincwadi zokuqala ezintathu zithi "uKristu" okanye "uChristos" ngolwimi lwesiGrike. Nangona kukho ukuhlukahluka kwe-Chi-Rho, ngokuqhelekileyo kubandakanya ukugqitywa kweeleta ezimbini kwaye ngokuqhelekileyo zijikelezwe isangqa.
I-Monogram kaYesu (Ihs)
Iimpawu ZamaKristu Iifayili yeGlosari Ihs (iMogogram kaYesu). Izithombe © Sue Chastain
Ihs yindlela yamandulo (okanye uphawu lweleta) likaYesu olubuyela kwinkulungwane yokuqala. Yisigcaziso esivela kwiileta zokuqala ezintathu (iota = i + eta = h + sigma = s) yegama lesiGrike elithi "Yesu." Ababhali babhala umgca okanye ibha phezu kweleta ukubonisa imfutshane.
Uthembela Kanjani UThixo Ngokupheleleyo?
I-Gemini neSagittarius Polarity
Iintlobo ezahlukeneyo zoNyango lwasekhaya
Isicwangciso seFabian: Ukugqithisa iSitha
Izinto eziPhambili zoLwazi lokuFunda
I-Fuel Injection Ithatha i-Corvette ka-1957 ukuya kwiNqanaba elitsha loPhando
Iilwimi zesiTaliyane: iRegalare
ULydia Maria Child
Isikhwama sokukhwela kwii-Skad Skates